Heerarka Bounce, Waqtiga Goobta iyo Dabagalka Dhacdooyinka | Martech Zone
Arbacada, Oktoobar 12, 2011 Jimco, Juun 13, 2014 Douglas Karr
Weli waxaa jira faham la'aan badan oo ka mid ah qeexidda heerka soo-kabashada, sida xun ee ay u saameyneyso bartaada, iyo sida aad uga shaqeyn karto hagaajinta. Maaddaama intiinna badani ay isticmaalaan Google Analytics, fahamka sida Google u daweeyo boodboodka ayaa muhiim ah.
Marka hore, ma ogaan kartid laakiin Celceliska Waqtiga Goobta martida boodboodaya had iyo jeer waxay u dhigantaa eber. Si kale haddii loo dhigo, sida aad fiirineyso Celceliska Waqtiga Goobta, waxay kaliya muujineysaa waqtiga ku qaatay goobtaada booqdayaashaas ha boodin. Taasi waxay ila egtahay aniga aniga. Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado inta ay dadku sii joogayaan ka hor intaanay boodbooyin si aan u arko haddii aan ugu yaraan soo jiito dareenkooda. Nasiib darrose, taasi suurtagal maahan haddii aan wax jabsasho ah la helin. Is tijaabi… sawirka halkaan ka muuqda wuxuu muujinayaa warbixin lagu sifeeyay kaliya soo booqdayaasha bounka ah… taasoo keentay a Celceliska Waqtiga Goobta ee 0.
Si xiiso leh ayaa ku filan, haddii booqdahaagu la falgalo boggaaga gudaha hab kasta oo la raad raaci karo (bannaanka bixida), looma kala soocno inay yihiin boodboodi! Marka… hadaad kudarto raadraaca dhacdo badhanka badhanka ama wicitaanka ficilka, oo qofka uu dhagsiiyo… looma kala qaadin inuu yahay boodbood. Dadka badankood waxay u maleynayaan in boodboodku yahay qofkasta oo ku soo degay bartaada ka dibna baxa. Maaha… waa qofkasta oo ku soo dega bartaada, oo aan sinnaba ula falgalin, ka dibna ka tago.
Haddii aad la socoto dhacdooyinka ama aragtiyada dheeraadka ah ee bogga, qofkaas farsamo ahaan ma soo boodin. Markaa haddii aad tahay maamule suuqgeyn ah oo la halgamaya sicirrada sare u kaca, waxaad u baahan tahay ugu yaraan inaad aragto haddii booqdayaashu ay la falgalayaan bartaada si uun ka hor inta aysan bixin. Tan waxaa lagu dhammeyn karaa iyadoo lagu darayo raad-raaca dhacdo meel kasta oo suurtagal ah.
Ka fikir waxyaabaha ku saabsan bogga meesha aad kari karto ku duub dabagal dhacdo:
Haddii aad leedahay xiriiriyeyaal boggaaga ah taas wado taraafikada ka baxsan ujeed, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad la socoto dhacdadaas. Waxay u baahan tahay in yar oo koodh ah, in kastoo, si loo hubiyo in dhacdada la qabtay intaadan ka bixin bogga.
Haddii aad leedahay a jQuery karti u leh goobta oo leh kontaroolo loogu talagalay booqdayaasha si ay ula falgalaan slider ama walxo kale, waxaad ku dari kartaa a Falanqaynta Google ee jQuery plugin ka dhigaysa mid fudud in lala socdo dhacdooyinka ku saabsan dhaqdhaqaaqa.
Ikhtiyaar kale oo horumarsan ayaa ah in lagu daro a labaad Xisaabta Google Analytics ee boggaaga oo la soco isla markiiba aragtida bogga labaad markii bogga uu buuxo. Tani waxay yareyn doontaa heerkaaga soo kabashada oo ah 0 koontadaas laakiin waxay ku siin doontaa celcelis ahaan waqtiga tirakoobka goobta ee booqde kasta. Kadib waxaad ku dari kartaa qayb leh shaandho ka yar 3 bog bog. Taasi waxay kala shaandheyn doontaa qof kasta oo farsamo ahaan aan soo kabsan oo aan ku siinaynin waqtiga xogta goobta.
Ha iloobin inaad heerarka soo kabashada warshadaha si aad u aragto sida bartaada loo barbardhigo. Hal qoraal - waxaan u muuqaneynaa inaan aragno goobo leh qiimeyn qiimeyn weyn oo ku soo boodaya qiime aad u sarreeya. Akhlaaqda martida ee kuwa ka imanaya raadinta waxay u egtahay inay ka tarjumeyso waxqabad badan oo meherad ah halkaas oo ay ku hubinayaan dhowr natiijooyin raadinta ah oo ay baxayaan ka dib markii ay si dhakhso leh u qaadaan bogga. Marka ha la yaabin haddii aad qabatid taraafikada raadinta intaa ka sii badan oo heerkaaga soo kabashadu uu kordho!
Tags: heerka cigtaraadraaca dhacdoAnalytics googlewaqtiga goobta